China TS Manual Hydraulic Surgical Operation Isiokwu maka ndị na-emepụta ụlọ ọgwụ na ndị na-ebu ya | Wanyu
Dị iche na tebụl na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ozuzu, anyị na-eji usoro mbuli mmiri na mmiri gas iji dozie azụ azụ na ụkwụ. Mee usoro nhazi ahụ ma ọ dị jụụ ma dịkwa mma.
A na-eji ntọala Y-eme ihe iji hụ na tebụl na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ hydraulic nwere nkwụsi ike dị elu na ohere n'efu, nke mere na ndị ọrụ ahụike nwere ike ịbịakwute onye ọrịa ahụ na ntanetị.
Ọdịdị nke nnukwu wiil ahụ na-emekwa ka ọ bụrụ mgbochi vibration na nkwarụ n'oge mmegharị.
1. Advanced Memory ụfụfụ
Ihe akụrụngwa nke okpokoro nke hydraulic na-ere ọkụ na-egbochi ya. Ihe nkpuchi polyurethane (PU) a na-akpụzi dị mfe ọcha ma nwee ogologo ndụ ọrụ.
2. Wuru na-akụrụ Bridge.
Fanye ahụ n'ime kwekọrọ ekwekọ onu, bugharia ahụ na-eme ka n'úkwù àkwà arịgo ma ọ bụ gbadata ka adabara ọnọdụ, mgbe ahụ dọpụtaara ahụ. Maka tebụl na-arụ ọrụ hydraulic TS, elu nke akwa akwa dị n'elu 100mm.
Advanced Memory ụfụfụ
3. Bubata Hydraulic System
Sistemụ hydraulic sitere na America na-eme ka mmegharị nke tebụl ọrụ na-arụ ọrụ na-adịgide adịgide na ngwa ngwa.
4. Angular Ammezi with Gdika Springs
Ma efere azụ na nkwonkwo efere ụkwụ nke okpokoro TS na-arụ ọrụ nwere gas gas cylinder na-akwado ihe owuwu, nke na-eme mgbanwe dị iche iche nwayọ, nwayọ, na ịma jijiji, ma na-echebe usoro nkwonkwo na igbochi onye ọrịa ahụ ịda.
5. Larger caster imewe
A na-eji ntọala buru ibu nke igwe na-arụ ọrụ arụ ọrụ na nnukwu casters (dayameta ≥100mm), nke na-agbanwe imegharị. Ndị ọgbụgba ahụ na-ebili mgbe braking, ihe ndina ahụ na-eme ka ala sie ike na ala, nkwụsi ike ahụ dịkwa mma.
3. Mbubata Hydraulic System
4. Mgbanwe ndị na-agbanwe agbanwe na Gas Springs
5.Larger caster imewe
Ihe Nlereanya TS Hydraulic Operating Isiokwu
Ogologo na Obosara 2050mm * 500mm
Ogo (Na ala) 890mm / 690mm
Isi Efere (N'elu na Ala) 60 Celsius / 60 Celsius
Efere Azụ (Elu na Ala) 75 Celsius / 15 Celsius
Efere (kwụ (Up / Down / Out) 30 ° / 90 Celsius / 90 Celsius
Ntughari Azụ (Aka ekpe na aka nri) 20 Celsius / 20 Celsius
2 Nkwado ahụ 1 Mmakọ
3 Nkwado aka 1 Mmakọ
4 Ubu Ike 1 Mmakọ
5 Ikpere ikpere 1 Mmakọ
6 Gwara mwekota 1 Ntọala
8 Eriri eriri 1 Ntọala
Nke gara aga: TDY-1 China Electric Medical Operating Isiokwu Price maka Hospital
Osote: LEDD500 / 700C + M N'uko ikanam Ugboro abụọ Dome Roomwa ime ụlọ Light na Video-Igwefoto
TY igwe anaghị agba nchara Manual Hydraulic Surgery Tab ...
TS-1 igwe anaghị agba nchara Mechanical Hydraulic Opera ...